Kuisirwa - Nanjing Karlter Kushongedza Zvishandiso Co., Ltd.
Luxury Vinyl Plank Dzvanya Kuisa Instruction
Ndokumbirawo kuti muverenge mirairo yese musati matanga. Kumisikidzwa zvisirizvo kuchaisa waranti.
Tarisa mapaneru ekuremara senge ruvara, musiyano mushe kana machipisi usati waiswa. Tarisa kuti chiteshi chakachena here uye chisina marara. Mapepa asina kukwana haafanire kushandiswa.
Iyo yepamusoro kamuri / kumhanya saizi ndeye 40x40 tsoka (12x12 metres).
Paunenge uchishandisa mapaneru kubva kune anopfuura rimwe package, tarisa kuve nechokwadi mavara uye pateni mechi usati watanga. Munguva yekumisikidza, sanganisa uye mechi machira kubva kune rimwe bhokisi mukati mevhu.
Bvisa baseboard moldings kana zvichibvira. Kana ivo vakaoma kubvisa, vanogona kusiiwa munzvimbo. Quarter kutenderera kuumbwa inokurudzirwa kuvhara iyo nzvimbo pakati pevhu uye baseboard.
Kuti uve nekubudirira kumisikidza, nzvimbo dzese dzepasi dzinofanirwa kuve dzakachena, dzakaoma, dzakasimba, kunyange uye nhanho. Bvisa macapetap staples uye glue usati waiswa.
Kuti utarise kunyatsoenzana, simbisa chipikiri pakati pevhu. Sunga tambo kune chipikiri uye sundira iro banga kuzasi pasi. Dhonza tambo yakasimba kukona iri kure kwazvo yekamuri uye ongorora pasi paziso reziso kune chero zvipenga pakati petambo nepasi. Fambisa tambo uchitenderedza mukombero weiyo kamuri uchicherekedza chero maburi akakura kupfuura 3/16 ''. Chero kupi kusaenzana kwepasi kweanopfuura 3/16 `` pamamita gumi kunofanirwa kusungwa pasi kana kuzadzwa neyakafanira kuzadza.
Usaise pane pamusoro ine matambudziko ehunyoro. Kongiri nyowani inoda kurapwa kwemazuva makumi matanhatu usati waiswa.
Pamhedzisiro yakanaka, tembiricha inofanirwa kunge iri 50 ° - 95 ° F.
Hupamhi hwemutsara wekutanga wemapuranga unofanirwa kunge wakaenzana nehupamhi neuyo wekupedzisira mutsara. Edza kuyambuka mukamuri uye ugovane nehupamhi hwepuranga kuti uone kuti mangani akazara mapuranga achashandiswa uye hupi hupamhi hunodiwa pamutsara wekupedzisira. Kana zvichidikanwa, cheka yekutanga puranga puranga kusvika ipfupi upamhi kuti riwedzere kuenzana kune yekupedzisira mutsara.
Kuita shuwa kuti yekushongedza pamusoro peiyo PVC iri pasi peiyo yakapera trim kana yaiswa, bvisa rurimi parutivi rurefu rwemapaneru erutivi runobata madziro. Shandisa banga rekushandisa kuti uwane zvibhakera kuburikidza nerurimi kanoverengeka kusvikira zvadzikira nyore. (Mufananidzo 1)
Tanga mukona nekuisa yekutanga jira nedivi rayo rakatemerwa rakatarisana nemadziro. (Mufananidzo 2)
Kuti ubatanidze pani yako yechipiri pamadziro, dzikisa uye ukiye rurimi rwekupedzisira rwepaneru repashure mugumo rekutanga repaneru. Tora mitsetse kumusoro zvakanyatsonaka. Iwo mapaneru anofanirwa kuve akati sandara kusvika pasi. (Mufananidzo 3)
Ramba uchibatanidza mutsara wekutanga kusvikira iwe wasvika yekupedzisira yakazara pani. Shandura pani yekupedzisira 180 ° nepateni padivi kumusoro. Zviise padivi pemutsara uye ugadzire panzvimbo panogumira panogumira mapaneru akazara. Shandisa banga rakapinza rekushandisa kuti unyore puranga, iro rinoteedzana nemutsara wechikamu chekucheka kwakachena. Batanidza sezvatsanangurwa pamusoro.Mufananidzo 4)
Tanga mutsara unotevera nechasara chechidimbu kubva mumutsara wekare kuti udzedzere purogiramu. Chidimbu chinofanirwa kuve chidiki che16 ''. (Mufananidzo 5)
Kutanga mutsara wechipiri, tenderedza panhivi panosvika 35 ° uye sundira padivi parutivi rurefu rwepaneru kupinda mugomba repadivi repaneru rekutanga chairo. Kana yadzikiswa, puranga rinobaya panzvimbo. (Mufananidzo 6)
Tevedza iyi mirairo yakafanana neepaneru rinotevera, kubatanidzira iyo yakareba ruoko kutanga nekuregedza 35 ° uye kusundira iyo ipaneru nyowani padhuze sezvinobvira kumutsara wapfuura. Ita shuwa kuti mativi akaiswa mutsara. Dzikisa pani pasi, nekukiya rurimi rwekupedzisira mugoridhe rekutanga repaneru. Ramba uchiisa mapaneru akasara nenzira iyi. (Mufananidzo 7)
Kuti ukwane mutsetse wekupedzisira, isa mutsetse uzere wemapuranga akananga pamusoro pemutsara wekare wemapuranga akaiswa achichengeta rurimi munzira imwechete seya yemapuranga akaiswa. Isa rimwe jira rakatarisa pasi kumadziro kuti ushandise segwara. Tsvaga mutsetse pasi pemapuranga. Cheka pani uye unamira munzvimbo. (Mufananidzo 8)
Kucheka kwakatenderedza mafuremu egedhi uye kudziyisa mavharesi, tanga watema pani yacho kune chaiyo urefu. Wobva waisa pani yakatemwa padyo nenzvimbo yayo chaiyo uye shandisa mutongi kuyera nzvimbo dzinofanira kutemwa. Maka iyo pani uye cheka iwo akaratidzirwa mapoinzi.
Chekesa mafuremu emasuo nekupidigura jira rakatarisa pasi uye kushandisa ruoko rwemaoko kutsemura kureba kunodiwa kuitira kuti mapaneru atedzemuke zviri nyore pasi pemapuranga